The Buddha (BC 623-BC 543) : ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၈) by မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
The Buddha (BC 623-BC 543)
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ
Biography Myint Kywe 先生 ( Myoma Myint Kywe ) / อาจารย์ Myint kywe / Myint Kywe 師範 / မြို့ မ မြင့်ကြွယ် / သမိုင်းပညာရှင် ဦးမြင့်ကြွယ် / ( ကရာတေး နည်းပြချုပ် ဦး မြင့်ကြွယ် )
အမှားသိလျှင် အမှန်ပြင်ဖို့လိုသည် Researched by- Myoma Myint Kywe ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
Alms giving in Buddhism, Bangkok by Myoma Myint Kywe
Mercy is forever (ความเมตตาเป็นตลอดไป) by Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
May the world be peace Why people rely on the teachings of Buddha? Researched by Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Buddhism IsaReal True Scientific Religion because... Researched by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
The Buddha (BC 623-BC 543) Researched by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Metta Is Essential (Metta ist wichtig) Researched by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Let's Meditate for Love, Peace and Happiness Researched by Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
The Ways of Real Peace Researched by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ-မြင့်ကြွယ်
Forgive and Love Each Other Researched by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Pure love เมตตา and May Everyone be Happy ทุกคนอาจจะมีความสุข by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ် มิวม่า มิตร จอย
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၉) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၈) by မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၇) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၆) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၅) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
The Buddha (BC 623- BC 543) ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အပိုင်း (၄) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၃) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာThe Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၂) by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ The Buddha (BC 623- BC 543) အပိုင်း (၁) by သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ Buddhism is the best religion အပိုင်း (၁) By- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ Buddhism is the best religion အပိုင်း (၂) by-Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
မြတ် ဗုဒ္ဓ နှင့် နို့တစ်လုံးဖိုး by- မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
ဩကာသ Okasa နှင့် လောကနီတိ Loka Niti အပိုင်း (၁) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ဩကာသ Okasa နှင့် လောကနီတိ Loka Niti အပိုင်း (၂) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ဗုဒ္ဓဝင် အကျဉ်း A Short History of Buddha by - Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
The Monogamy is the Best တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်များ (Buddhist monks) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
မိဘကျေးဇူး Gratitude to Parents by - သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ (နိုင်ငံတော် ဗုဒ္ဓသာသနာနေ့) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
How to live in peace and harmony! (วิธีที่จะอยู่ในความสงบและความสามัคคี!) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ရှိခိုးဦးချပုံ ဦးချနည်း by- Myoma Myint Kywe သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Buddha Is the Light of the World ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား သည် ကမ္ဘာ့အလင်းရောင် ဖြစ်သည် by- Myoma Myint Kywe သမိုင်းပညာရှင် မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံနည်းကျ ကရာတေး မြို့ မ မြင့်ကြွယ် 首席先生 Myint Kywe , Myoma Myint Kywe
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား က ငါသည် ဘုရားဖြစ်သည် ဟု ပြောခဲ့ပါသည် Researched by- Myoma Myint Kywe
ဘုရား တရား သံဃာ 釈迦,法 (仏教),僧伽 ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ဆည်းကပ်ပါ We take Refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. Myoma Myint Kywe
Center for the Child by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
၉၄ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ ၉၄ နှစ်မြောက် မြို့မကျောင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုအပ်ပါသည် / Myoma National High School ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
Myoma Myint Kywe quotes
ဗုဒ္ဓ သာသနာ မကွယ်ပျောက် ပါစေနှင့် by- Myoma Myint Kywe ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
Impermanence (Anicca) အနိစ္စ Researched by- Myoma Myint Kywe
Teaching of Buddha is the best การเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดคือ Researched by- Myoma Myint Kywe
ละเว้น: Lobha (โลภะ), Dosa (โทสะ), Moha (โมหะ) by- Myoma Myint Kywe ( อาจารย์ Myint Kywe )
၉၄ နှစ်မြောက် မြို့မကျောင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုအပ်ပါသည် / Myoma National High School ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
The King Bimbisara พระเจ้าพิมพิสาร ဗိမ္မိသာရမင်း
We should love our parents and Reasons Why We Love Our Parents by- Myoma Myint Kywe
เรารักและศรัทธา Luang Phor SODH Wat Paknam The Venerable great master Phramongkolthepmuni and founder of Dhammakaya อาจารย์ มิตร จอย Myoma Myint Kywe
พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) Luang Por Dhammajayo and คุณยายอาจารย์มหารัตนอุ Teacher Khun Yay by- อาจารย์ มิตร จอย (Myoma Myint Kywe)
About Buddha and Buddhism in Burma (Myanmar) by- Myoma Myint Kywe
On the tip of the nose, abdomen, love (Metta) meditation, and the GOAL of the Buddhist path Myoma Myint Kywe (มิวม่ามิตรจอย) นักเขียน, ประวัติศาสตร์, อาจารย์, หัวหน้าคาราเต้
အာနာပါန Anapana သမထ Samatha ဝိပဿ နာ Vipassana by- อาจารย์ Myint Kywe
How does อาจารย์ U Myint Kywe know about Wat Phra Dhammakaya? by- Thaw Tar Win
A Short History of Dhammakaya Temple อาจารย์ ...
Basic guidelines foralay Buddhist by Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Why we believe in teachings of Buddha and what we believe in Buddhism? Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Teachers (instructors) responsibilities by Myint Kywe
Buddha allowed criticism also on his teaching Researched by- Myoma Myint Kywe
Why people don't believe in God? Why People respe...
How does Hinduism differ from Buddhism? Why is the...
အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ Buddhism is the best religio...
(၆၈) နှစ်မြောက် ပင်လုံညီလာခံ ပြည်ထောင်စုနေ့(68th Anniversary of Burma’s Union-Day) မြို့ မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
သစ္စဥာဏ် ကိစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် ဓမ္မရံသီဆရာတော် အရှင်သုနန္ဒ ...
"O Vakkali, whoever sees the Dhamma, sees me" ‘အို ဝက္ကလိ၊ တရားကိုမြင်သော သူသည် ငါဘုရားကိုမြင်၏။’ Researched by Myoma Myint Kywe ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ်)
Basic Manners and Ethics - Part 1 Karate Myint Kywe (Myoma Myint Kywe)
Basic Manners and Ethics in Karate by Karate Myint Kywe (Myoma Myint Kywe)
We must do pay back with METTA to their debt by Myoma Myint Kywe
Don't bully others and how to stop it by - Karate Myint Kywe
What Buddhism is? Researched by- Myoma Myint Kywe
We must do pay back with METTA to their debt - Myoma Myint Kywe
How to overcome past bad karma (or) kamma ! by- Karate Myint Kywe (a) Myoma Myint Kywe
Buddha said “The crystal of salt” By - Myoma Myint Kywe
How to count correctly how about old Buddhism religion is! - Myoma Myint Kywe
Anjali mudra, Namaste, Prostration and Etiquette in Buddhist temple - Myoma Myint Kywe
Heraclitus, Confucius, Newton and Einstein recommended to Buddhism Myoma MyintKywe
汉传佛教 / 漢傳佛教 Beginning of the Buddhism in China by- Myoma Myint Kywe ဦးမြင့်ကြွယ် ( မြို့ မ မြင့်ကြွယ် )
What's the difference between rebirth and reincarn...
What is the connection between THEORY and PRACTICE? What isaScientific Hypothesis and THEORY? - Myoma Myint Kywe မြို့မ မြင့်ကြွယ်
ကိုယ် နှုတ် စိတ် အမူအရာ ယဉ်ကျေးခြင်း Important Manners and Etiquette for Every Day Basic discipline of Burmese civilization! Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Buddha Taught Everything is Impermanence (ANICCA)...
Honesty ရိုးသားခြင်း - မြို့မ မြင့်ကြွယ် Myoma Myint Kywe
The Buddha (BC 623- BC 543)
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
အပိုင်း (၈) Part 8
Researched by- Myoma Myint Kywe
မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ် ကျင့်ဝတ်(၁)
(Basic etiquette, morality and ethics in Buddhism)
ကျင့်ဝတ်-ဟူသည် ရှောင်သင့်သည့် အရာများကိုရှောင်၍ ဆောင်သင့်သည့် အရာ များကို ဆောင်ကာအမြဲတစေ ထိန်းသိမ်းလိုက်နာအပ်သည့် သို့တည်း မဟုတ်၊ ဆောင် ရွက်ရမည့် ကိုယ်စောင့်တရားများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
သားသမီးတိုင်းတွင် မိဘဟူသည် ရှိရာ၏။ ထို့အတူ မိဘတိုင်းတွင်လည်း သားသမီးဟူသည်ရှိရာ၏။ သို့ဖြစ်ရကား ယနေ့ခေတ်သမယ အခါတွင်သား သမီး တို့ကလည်း ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်စပ်ဆိုင်သော ၀တ်တရားများကို မသိကြတော့၊ အလေးကရု မပြုကြတော့သလို၊ အချို့အချို့သော မိဘများ ကလည်း သားသမီးတို့အပေါ်တွင် အလိုလိုက် လွဲတတ်ကြသလို တစ်ချို့ ကား သားသမီးတို့အပေါ် မိဘတို့ ထားအပ်သော၊ ရှိအပ်သော ၀တ်တရား တို့ကို ကျေပွန်အောင်ပင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြတော့ပဲ တာဝန်ပျက်ကွက် လာ ကြသည်လည်း တွေ့မြင်လာရလေသည်။
ဤတွင်မက ဆရာနှင့်တပည့် ဆက်ဆံရေး၊ လင်မယားတို့၏ ဆက်ဆံ ရေး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့၏ ဆက်ဆံရေး၊ ကျွန်နှင့် သခင် ( အလုပ်ရှင် နှင့် အလုပ်သမား ) တို့အကြား အပြန်အလှန်ရှိအပ်သည့် ဆက်ဆံရေး၊ ဆရာနှင့် ဒကာတို့၏ အပြန် အလှန် ဆက်ဆံရေး၊ စသည်ဖြင့် မြောက်မြားစွာရှိခဲ့လေရာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးနှင့် အပြန်အလှန် ထားရှိအပ်သည့် ၀တ္တရားများကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နားလည်မှု များ အားနည်းလာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိလာရပြန်သည်။ တစ်ချို့ကား သိပင်မသိကြတော့ပေ။
သို့ဖြစ်ရကား ထိုထိုသော သူများသိရှိနားလည် နိုင်စေရန်နှင့် မိမိတို့၏ ၀တ္တရားများကိုသော်၎င်း၊ မိမိတို့နှင့်ဆိုင်ရာ အပိုင်းများကို သိရှိနားလည်လာ ကြ၍ လိုက်လံကျင့်ကြံနိုင်စေခြင်းအတွက် နှင့် အနာဂါတ် လူငယ်တို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဤနေရာမှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖောက်သည်ချ တင်ပြအပ်ပါသည်။
သင်္ဂဇာဆရာတော်၏ သိင်္ဂါလောဝါဒ ဆုံးမစာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တရားတော်များသည် တကယ်ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သော မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်၍ ဟောတော်မူထား၏။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းစာများ၌ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမသာသနာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အကျဉ်းချုပ်လျှင် ဗောဓိပက္ခိယတရား ၃၇-ပါးဖြစ်၏။
ယင်းကို အကျဉ်းချုပ်လျှင် မဂ္ဂင် ၈-ပါးဖြစ်၏။
ယင်းကို အကျဉ်းချုပ်လျှင် သီလ သမာဓိ ပညာ သိက္ခာ ၃-ပါး ဖြစ်၏။
ယင်းကို အကျဉ်းချုပ်လျှင် အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသော ပြည့်စုံမှု ရသ၊ အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသော အရသာတမျိုးသာ ရှိသည်ဟု ဆိုထားပေသည်။( ၀ိ-ဋ္ဌ၊ ၁-၁၃)
ဘုရားရှင်၏ ဆန္ဒတော်ကလည်း သတ္တ၀ါအားလုံးကို အရိယာဖြစ်စေလိ်ုတော်မူ၏။ သို့ရာတွင် သတ္တ၀ါအမျိုးအစား များစွာရှိရာ အားလုံး ကျွတ်တမ်းမ၀င်နိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် တရားဟောရာတွင် သတ္တ၀ါတို့၏စရိုက် (အဖြစ်များသောတရား)၊ အဇ္ဈာသယ (ဓာတ်ခံ)၊ ဥပနိဿယ (အားကြီးသော မှီရာအကြောင်း ရှေးကောင်းမှု) တို့ကို ကြည့်၍ သရဏဂုံတည်မည့်သူ ဖြစ်လျှင် သရဏဂုံတည်ရုံမျှ၊ ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းနိုင်မည့်သူဖြစ်လျှင် ငါးပါးသီလ လုံခြုံရုံမျှ စသည်အားဖြင့် တန်ရုံတန်ရုံမျှ တရားတော်ကို ဟောတော်မူပေသည်။ (ဓမ္မပဒ ဋ္ဌ၊ ၁-၄)
ထိုသို့ဟောတော်မူရာ၌ အဆင့်အတန်း မြင့်သော သမထ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်များ ပါဝင်သလို လူ့လောကအလိုက် ကျင့်ရမည့် ကျင့်စဉ်များလည်း ပါဝင်ပေသည်။ မှန်၏။ မင်္ဂလသုတ်တော်ကိုကြည့်ပါ။ ရှေးဦးစွာ လူမိုက်ကို မပေါင်းနှင့်၊ လူလိမ္မာကို ပေါင်းသင်းပါ၊ စသည်ဖြင့် လောကီမင်္ဂလာ ကျင့်ဖွယ်ရာများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ညွှန်ပြတော်မူ၏။ ထိုလောကီမင်္ဂလာ သက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်သေး၍ တပေါ စ ဗြဟ္မစရိယဉ္စ၊ အရိယသစ္စာန ဒဿနံ၊ နိဗ္ဗာန သစ္ဆိကိရိယာ စ=တရားကျင့်၊ သစ္စာလေးပါးသိ၊ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်း(သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဖြစ်ရခြင်း) သည် မင်္ဂလာ-ဟုလည်းကောင်း။ ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ-စသည်ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်ရခြင်းသည် မင်္ဂလာ-ဟုလည်းကောင်း ဟောတော်မူထားပေသည်။
(၁) ကမ္မကိလေသ=စိတ်ကို ညစ်နွမ်းစေသော အကုသိုလ်အလုပ်လေးမျိုး။
(၂) စတုဋ္ဌာန=မရောက်ထိုက်သော အဂတိ တရားလေးပါး။
(၃) ဆအပါယမုခ=စီးပွားပျက်ကြောင်း ခြောက်ပါး စသည်များ။
(၄) မိတ်ဆွေတု၊ မိတ်ဆွေစစ် လက္ခဏာများ။
(၅) မိဘကျင့်ဝတ်၊ သားသမီးကျင့်ဝတ်၊ လင်ကျင့်ဝတ်၊ မယားကျင့်ဝတ်၊ ဆရာကျင့်ဝတ်၊ တပည့်ကျင့်ဝတ် စသည်များကို အကျယ်ဟောတော်မူထားပေသည်။ (ဒီ ၃-၁၄၅)
ဤသုတ်တော်ကို သိင်္ဂါလသတို့သားအား အကြောင်းပြု၍ ဟောတော်မူအပ်သော သုတ်တော်ဖြစ်၍ သိင်္ဂါလသုတ္တ-ဟု သင်္ဂါယနာတင်မထေရ်တို့ နာမည်တပ်တော်မူ၏။ ( ဒီ-ဋ္ဌ ၃-၁၂၄)
အချို့ဆရာများက သိင်္ဂါလသတို့သားအား ဆုံးမသြ၀ါဒပေးအပ်သော သုတ်တော်ဖြစ်၍ သိင်္ဂါလောဝါဒ-သုတ်တော်ဟု ခေါ်ကြ၏။ ဤသုတ်တော်၌ လူဝတ်ကြောင်တို့ ကျင့်ဖွယ်ရာများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါဝင်သဖြင့် ဂိဟိဝိနယ-လူဝတ်ကြောင်တို့၏ ၀ိနည်း၊ (၀ါ) လူ့ကျင့်ဝတ်သုတ်တော်ဖြစ်၏။ ဤကျင့်ဝတ်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံး လိုက်နာပါက မဆုတ်ယုတ်ဘဲ ဧကန်တိုးတက်ကြီးပွားမည်-ဟု အဋ္ဌကထာဆရာက မှတ်ချက်ပြုတော်မူသည်။ (ဒီ-ဋ္ဌ၊ ၃-၁၄၁)။
ထိုသုတ်တော်ကို လူတို့လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်စေရန် ရှေးဆရာတော်များက မြန်မာစကားပြေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လင်္ကာဆောင်ပုဒ်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရေးတော်မူခဲ့ကြပေသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် အလယ်လောက်၌ ဘကြီးတော်မင်းဟုခေါ်သော စစ်ကိုင်းမင်းနှင့် နန်းမတော် မယ်နုတို့လက်ထက်တွင် ထင်ရှားသော ဆရာတော် ဦးဗုဓ်သည် သိင်္ဂါလသုတ်တော်ကို အခြေခံ၍ ဂိဟိဝိနယ-ကျမ်းကို ရေးသားတော်မူ၏။ ယင်းကျမ်း၌ သိင်္ဂါလသုတ်တော်လာ အဓိပ္ပါယ်များကို စကားပြေဖြင့် ဖော်ပြရုံသာမက လင်္ကာဆောင်ပုဒ်များစွာဖြင့် ရေးတော်မူပေသည်။
ထိုဆရာတော် ဦးဗုဓ်၏-ဂိဟိဝိနယ-ကျမ်း၌ ပါဠိတော်မှာ ဟောတော်မူသည့် အစဉ်အတိုင်း ကမ္မကိလေသ လေးပါးမှစ၍ အကျဉ်းအကျယ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တကျမ်းလုံး ခြုံမိအောင် လင်္ကာပိုဒ်ပေါင်း ၃၁-ပုဒ်ဖြင့် ရေးတော်မူသည်။ ဆရာတော်၏ လင်္ကာများသည် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံ၏။ ကျမ်းဂန်နှင့် ညီ၏။ အဓိပ္ပါယ်လေးနက်၏။ သို့ရာတွင် လင့်ကျင့်ဝတ်၊ မယားကျင့်ဝတ် ဆိုင်ရာ စသည်၌ ပေါ်လွင်မှု နည်း၏။
ဤအချက်ကို သတိပြုမိဟန်တူတော်မူသော သင်္ဂဇာဆရာတော်က သားသမီးကျင့်ဝတ်၊ မိဘကျင့်ဝတ်၊ တပည့်ကျင့်ဝတ်၊ ဆရာကျင့်ဝတ်၊ လင့်ကျင့်ဝတ်၊ မယားကျင့်ဝတ် စသည်တို့အတွက် လင်္ကာအသစ် ထပ်မံရေးသားတော်မူပေသည်။ ထိုလင်္ကာများကို သိင်္ဂါလောဝါဒဆုံးမစာ-ဟု နာမည်ပေးတော်မူ၏။ တိလောကလုံး၊ ညွတ်ရုံးဦးချ၊ နှိုင်းမမျှသား၊ ဘုရားရွှေစက်၊ ရောင်ပြိုးပြက်ကို၊ ဦးထက်တင်ထား၊ ရိုညွတ်တွား၍-ဟု အစချီ၍ လင်္ကာပိုဒ်ပေါင်း ၁၃-ပိုဒ်၊ သံပေါက် ၃-ပုဒ်ဖြင့် ရေးသားတော်မူခဲ့ပေသည်။
ယခုခေတ် ရှင်လူအများရရှိ၍ အသုံးပြုနေသော
(၁) ကျွေးမွေးမပျက်၊ ဆောင်ရွက်စီမံ၊ -စသော သားသမီးကျင့်ဝတ်။
(၂) မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်-စသော မိဘကျင့်ဝတ်။
(၃) ညီညာထကြွ၊ ဆုံမနာယူ-စသော တပည့်ကျင့်ဝတ်။
(၄) အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ စသော ဆရာကျင့်ဝတ်။
(၅) မထီမဲ့ကင်း၊ အပ်နှင်းဥစ္စာ-စသော လင်ကျင့်ဝတ်။
(၆) အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ-စသော မယားကျင့်ဝတ် လင်္ကာတို့သည် သင်္ဂဇာဆရာတော်၏ လက်ရာများ ဖြစ်ပေသည်။
ကျွေးမွေးမပျက်၊ ဆောင်ရွက်စီမံ၊ မွေခံထိုက်စေ၊ လှူမျှဝေ၍၊
စောင့်လေမျိုးနွယ်၊ ၀တ်ငါးသွယ်၊ ကျင့်ဖွယ် သားတို့သာ။
သားသမီးတို့တွင်လည်း အမြဲတမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်အပ်သည့် ကိုယ် စောင့်တရား ကျင့်ဝတ် (၅) ပါးရှိပါသည်။ ထို(၅)ပါးတို့တွင်-
ကျွေးမွေးမပျက်- ဟူသည် သားသမီးများက မိဘများကို တစ်ဖန်ပြန်လည် ပြုစု စောင့်ရှောက် လုပ်ကိုင် ကျွေးမွေးကြရာတွင် မိဘများအပေါ်တွင် ငြူစူ အမျက်ထွက်၍ အော်ငေါက်ခြင်း၊ အလုပ်အကျွေးပျက်ခြင်း တို့ကိုဆိုလိုပါ သည်။ ထိုသို့မဖြစ်ရာ။ မငြူစူ မစောင်းမြောင်းရာ။
ဆောင်ရွက်စီမံ- သားသမီးများက မိဘများအပေါ်တွင် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက် ပြုစု ပေးစရာရှိသည့် ပြုဖွယ်ကိစ္စ အ၀၀ကို မမေ့မလျော့ဆောင်ရွက် စီမံကြရ မည်ကိုဆိုလိုပါသည်။
မွေခံထိုက်စေ- ဟူသည်ကား သားသမီးတို့သည် မိဘများက ပေးအပ်မည့် အမွေများကို ခံယူထိုက်သော သူများဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ကြရမည် ကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ မိဘများ၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေဟူသမျှကို ခံယူ ထိုက်သော သူများဖြစ်ကြရပေမည်။
လှူမျှဝေ၍ -ဟူသည် သားသမီးများက မိဘများအတွက် ရည်ရွယ်၍ အလှူ အတန်းအများကို ပေးကမ်း လှူဒါန်း စွန့်ကြဲအပ်ကြပေသည်။
စောင့်လေမျိုးနွယ်-သားသမီးတို့သည် မိဘတို့၏ မျိုးရိုးဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တကွ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတို့ကို အစဉ်မပျက်အောင် အသက်နှင့်သော်လည်း ရင်း၍စောင့်ထိန်းတတ်ကြရမည် ဖြစ်သလို၊ စောင့် ထိန်းအပ်ပေသည်။
မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊ အတတ်သင်စေ၊
ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင်၊ ၀တ်ငါးအင်၊ ဖခင်မယ်တို့တာ။
ဟူသည်ကား ---မိဘတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများမှ မကောင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်နေသည်ကို သိပါက အလိုလိုက်၍ လက်ပိုက်ကြည့်နေ ခြင်းငှာ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်မနေကြပဲ တားမြစ်ပိတ်ပင်သင့်သည်များကို တားမြစ် ၍ ဆုံးမသင့်သည်များကိုလည်း ဆုံးမရန် လိုအပ်လှပေသည်။
ဟူသည်ကား ---မိဘတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများအား အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းများကိုပေး၍ လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်မှုများပေးအပ်ကာ ပဲ့ပြင် ထိန်းကြောင်းအပ်သည်သာ။
ဟူသည်ကား ---မိဘတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများအား ၄င်းတို့၏ ဘ၀ရှေ့ရေး အတွက် သိသင့်သိထိုက် တတ်သင့်တတ်ထိုက်သော အတတ် ပညာ/နည်းပညာများကို သင်ကြားပေးကြရပေမည်။
ဟူသည်ကား ---မိဘတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ကိုင်ရာတွင်လိုအပ်သည့် အရင်းအနှီးများထုတ် ပေးခြင်း၊ သား/သမီးတို့၏ ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် မတည်ငွေများကို ထည့်ဝင် စိုက်ထူပေးထားခြင်း တို့ကို တင်ကြို၍ ပြုလုပ်ထားပေးအပ်ပေသည်။
ဟူသည်ကား ---မိဘတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများ အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်လာသည့် အခါ သမီးကညာ အခါမလင့်ရာ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း မိမိတို့၏ သား/သမီးတို့နှင့် သင့်သင့်ရာကိုရွေး၍ အိမ်ထောင်ရက်သားချပေးခြင်း (၀ါ) ထိမ်းမြာမင်္ဂလာဆောင်ကျဉ်းပေးခြင်း ကိုလည်း အချိန်မီပြုအပ်၏။
ညီညာထကြွ၊ ဆုံးမနာယူ၊ လာမူကြိုဆီး၊ ထံနီးလုပ်ကျွေး၊
သင်တွေးအံရွတ်၊ တပည့်ဝတ်၊ မချွတ်(၅)ခုသာ။
ဟူသည်ကား -------ဆရာနှင့် တပည့်အကြားတွင် ထားအပ်၊ သိအပ်၊ ကျင့် အပ်သော၊ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုများပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာ/ဆရာမများ စာသင်ခန်း အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည့်အခါ ညီညာစွာဖြင့် ထိုင်ရာမှထ၍ နှုတ်ခွန်း ဆက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား ------တပည့်ဖြစ်သူများသည် ဆရာ/ဆရာမများ၏ သွန်သင် ဆုံးမမှု အဆုံးအမများကို လိုက်နာ ကျင့်ကြံကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား -----တပည့်တို့သည် ဆရာ/ဆရာမများ မိမိတို့ထံလာသည် ကို တွေ့မြင်ပါက၄င်း၊ မည်သည့်နေရာတွင် တွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ ခရီးဦး ကြို ဆိုကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား ------တပည့်တို့သည် ဆရာ/ ဆရာမများထံပါးတွင် အလုပ် အကြွေး ပြုသင့််ကြပါသည်။
ဟူသည်ကား -------တပည့်တို့သည် ဆရာ /ဆရာမများ သင်ကြားပို့ချ လိုက်သော သင်ခန်းစာများကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှ သင်ကြားတတ်မြောက်ကြရ မည် ဖြစ်သကဲ့သို့ အစဉ် တွေးတောကြံဆ သင်အံရွတ်ဖတ်နေကြရ မည်ဖြစ် ပေသည်။
အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊
သင့်ရာအပ်ပို့၊ ဆရာတို့၊ ကျင့်ဖို့ဝတ်(၅)ဖြာ။
ဟူသည်ကား -----ဆရာ/ ဆရာမများသည် မိမိတို့၏ တပည့်များအပေါ်တွင် အသိပညာ/အတတ်ပညာများကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်သည် အထိ သင် ကြား ပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား -----ဆရာ /ဆရာမတို့သည် မိမိတို့၏ တပည့်များ အပေါ်တွင် သွန်သင် ဆုံးမ၍ အမြဲတစေ နည်းလမ်းကောင်းများ ကိုသာ ညွှန်ကြားထိန်း မတ် ပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား -----ဆရာ /ဆရာမများသည် တပည့်များ အပေါ်တွင် ၀ိဇ္ဇာ ပညာများအပြင် သိပံ္ပပညာများကိုလည်း သင်ကြားတတ်မြောက်စေကြရ မည်ဖြစ်ပေသည်။
ဟူသည်ကား ------ ဆရာ/ဆရာမများသည် မိမိတို့၏ တပည့်များအပေါ် တွင် ကျရောက်ဆဲ (သို့တည်းမဟုတ်) ကျရောက်လာမည့် ဘေး/အန္တရာယ် များမှ ကာကွယ်တားဆီး ပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဟူသည်ကား ------ ဆရာ/ ဆရာမတို့သည် မိမိတို့၏ တပည့်များအား အခြားသော အတတ်ပညာများကို သင်ကြားတတ်မြောက်စေခြင်းငှာ ၄င်းတို့ နှင့် သင့်လျော်မည့် အတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးမည့် အခြားသော ဆရာ/ဆရာမတို့ထံ လွှဲပြောင်းအပ်နှံပေးကြရမည် ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေ ကျင့်ဝတ် (၅)ပါး
ဒါယကာ ကျင့်ဝတ်(၅)ပါး
ပျင်းရိခြင်းကား၊ ယိုယွင်းဥစ္စာ ပျက်ကြောင်းတည်း။
ဆင်းရဲစု၊ (၆)ခု ခါမဲ့သွားခြင်းတည်း။
ကခြင်းတစ်လီ၊ သီခြင်းတစ်သီး၊ မှုတ်တီးသဘင်၊ ပြိန်ဖျင်းတစ်အုပ်၊ လက်ခုပ်တစ်တီး၊ အိုးစည်တစ်ဖျာ၊ ရှိရာရှာ၍၊ ဥစ္စာပျက်မှု၊ ဤ (၆) ခုကား၊ ကြည့်ရှုသဘင်အပြစ်တည်း။
မလိုထိမ်းမြား၊ ဤ (၆)ပါးကား၊
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေစစ်အကြာင်းများနှင့် ပတ်သက်စပ်လျဉ်း၍ သိင်္ဂါလောဝါဒ သုတ်တွင် ဟောကြားဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်။
မိတ်ဆွေတု (၄) ယောက်
(၁) အညဒတ္ထုဟရ - စင်စစ်အားဖြင့် သူကသာဆောင်ယူတက်သူ၊
(၂) ၀စီပရမ - စကားအားဖြင့် ပေးတက်သူကဲ့သို့ ဖြစ်သူ၊
(၃) အနုပီယဘာဏီ - အလိုလိုက်၍ အကြိုက်ကိုသာ ပြောတက်သူ၊
(၄) အပါယသဟာယ - ပျက်စီးကြောင်းအမှုတို့၌ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူ။
ဤလေးမျိုးသည် မိတ်ဆွေဟုခေါ်သော်လည်း မိတ်ဆွေစစ်ဟု မမှတ်ယူနိုင်သော မိမိ၏အကျိုစီးပွားကို ပျက်စီးစေနိုင်သော မိတ်ဆွေအတုများဟု ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ထိုလေးမျိုးတွင် ထပ်မံ၍ပိုင်းခြားလေသောအခါ တစ်မျိုးလျှင် လေးမျိုးစီထပ်ခွဲခြမ်းကာ စုစုပေါင်း ၁၆ မျိုးကို ဘုရားရှင်သည် သိင်္ဂါလောဝါဒ သုတ်တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
(၁) အညဒတ္ထုဟရ - စင်စစ်အားဖြင့် သူကသာဆောင်ယူတက်သူ
အညဒတ္ထု - စင်စစ်အားဖြင့် + ဟရ- သူကသာ ဆောင်ယူတက်၊ သူကသာအသာယူတက်သော မိတ်ဆွေတု
(က) မိတ်ဆွေ၏အိမ်သို့သွားသည့်အခါ မိမိကပေးဖို့မရည်ရွယ်ဘဲ ထိုအိမ်၌ အ၀တ်စသည်ကိုမြင်၍ လိုချင်သောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ အိမ်ရှင်ပေးလာစေရန် ထိုပစ္စည်းကို ချီးမွမ်း၏။ အိမ်ရှင်က မပေးလိုက်လျှင် မကောင်းသောကြာင့် ထိုပစ္စည်းကို ပေးလိုက်ရ၏။ ထိုသူသည်လည်း မိတ်ဆွေတုဖြစ်၏။
(ခ) မိတ်ဆွေအိမ်သို့သွားသောအခါ မိမိကလက်ဆောင်အနည်းငယ်ကို ယူသွား၍ မိတ်ဆွေထံမှများများရယူဖို့ရန် မျှော်လင့်သူ၊ သို့ တည်းမဟုတ် ကြံစည်သူ၊ သို့တည်းမဟုတ် အားထုတ်ပြုမူသူ၊ ထိုသူသည်လည်း မိတ်ဆွေတုသာဖြစ်၏။
(ဂ) မိမိတွင် ဘေးဒုက္ခတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်နေချိန်ဝယ် မိတ်ဆွေ၏အကူအညီကိုလိုလား၍ အလုပ်ကို (အစေအပါးကဲ့သို့) အလွန်ပြုလုပ် ပေးတက်သော်လည်း မိမိမှာဘေးရန်မရှိလျှင်သော်ကား ထိုကဲ့သို့ မလုပ်သောသူ၊
(ဃ) မိတ်ဆွေအဖြစ်ဖြင့်ပေါင်းသော်လည်း တကယ်အကျိုးလိုလား၍ ပေါင်းသည်မဟုတ်၊ မိမိအတွက် တစ်စုံတစ်ခုသော အကျိုးကို မျှော်လင့်၍ ပေါင်းဖော်သူ။။။
ဤလေးမျိုးသည် သူ့ဘက်ကချည်း အသာယူ၍ပေါင်းသောကြောင့် မိတ်ဆွေစစ် မဟုတ် မိတ်ဆွေတု သာဖြစ်၏။
(၂) ၀စီပရမ - စကားအားဖြင့် ပေးတက်သူကဲ့သို့ ဖြစ်သူ
၀စီ - စကားသာလျှင် + ပရမ - အလွန်အတိုင်းအရှည်ရှိသူ၊ စကားအားဖြင့်သာ ပေးတက်သူကဲ့သို့ဖြစ်၍ စင်စစ်အားဖြင့်ကား မပေးတက်သော (နှုတ်သာပါ၍ လက်မပါသော ) မိတ်ဆွေတုလည်း လေးမျိုးရှိပြန်၏။
(က) လွန်လေပြီးသော ပစ္စည်းဖြင့် လောကွက်လုပ်တက်သူ (မိမိအိမ်သို့ မိတ်ဆွေလာလျှင် “ အို.. မနေ့ကတော့မလာဘဲကိုး.. မနေ့က စားစရာတွေပေါလိုက်တာ… ကျုပ်က မိတ်ဆွေလာမလားလို့ လာမလားကိုတောင် မျှော်နေမိသေးတယ်.. အခုတော့ အားလုံးကုန်သွား ပြီ.. ”…၊ “ မနှစ်က ခင်ဗျားက မလာဘဲကိုဗျ… မနှစ်ကစပါးအတော်ရတယ်.. သည်နှစ်တော့မရဘူး.. ”
ဤသို့စသည်ဖြင့် လွန်ခဲ့သောပစ္စည်း အရာဝတ္ထုတို့ဖြင့် လောကွတ်လုပ်တတ်သူ။
(ခ) နောက်လာမည့်ပစ္စည်းဝတ္ထုများဖြင့် လောကွတ်လုပ်တက်သူ၊( မည်သည့်အခါမှာ စားသောက်ဖွယ်လုပ်ပါဦးမယ်၊ အဲဒီအခါတော့ မိတ်ဆွေကို အကြောင်းကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ယခုနှစ်တော့ လယ်တွေအတော်ကောင်းပါတယ်၊ လယ်ပြီးတဲ့အခါတော့ မိတ်ဆွေကို ကြည့်ရှုထောက်ပံ့နိုင်စရာရှိပါတယ်၊ ဤသို့စသည်ဖြင့် မပေါ်ပေါက်သေးသော ပစ္စည်း အရာဝတ္ထုတို့ဖြင့် လောကွတ်လုပ်တတ်သူ။
(ဂ) စကားဖြင့်လောကွတ်လုပ်တက်သူ၊ (သူကမြင်းပေါ်မှာစီးနေတုန်း မိတ်ဆွေကိုမြင်လျှင် “လာလေ စီးလှည့်ပါဦးလား” ဟုလည်း ကောင်း၊ သူကအ၀တ်ကောင်းကောင်းဝတ်နေစဉ် မိတ်ဆွေကိုမြင်၍ “ ဒီအ၀တ်ဟာ မိတ်ဆွေနဲ့သိပ်တော်တာပဲ.. ဒါပေမယ့် ကျုပ်မှာလည်း ဒီတစ်ထည်တည်း ရှိနေလို့” ဟုလည်းကောင်း ဤသို့သော စကားဖြင့် အမှန်တကယ် ကျေးဇူးပြုခြင်းမရှိဘဲ လောကွတ်လုပ်တက်သူ။
(ဃ) အကူအညီတောင်းလျှင် အကြောင်းမညီညွတ်သူ၊ (တစ်စုံတစ်ခုကိစ္စရှိ၍ အကူအညီတောင်းလာလျှင်, ဥပမာ- လှည်းကို ခဏငှား လေလျှင် “ လှည်းဘီးပျက်နေတယ်၊ ၀င်ရိုးကျိုးနေတယ်၊” စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်ကိစ္စအတွက် လိုက်ခဲ့စမ်းပါဟု ပြောလျှင် “ ကျုပ်မှာသွားစရာရှိနေလို့” စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငွေကိုချေးငှားလျှင် “မလွယ်သေးလို့ပါ” စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း ချက်ချင်းပြုဖွယ် ကိစ္စအတွက် ကူညီဖို့ပြောလာလျှင် အကြောင်းမညီမညွတ်သည်ကို ပြောဆိုတက်သူ။)
(၃) အနုပီယဘာဏီ - အလိုလိုက်၍ အကြိုက်ကိုသာ ပြောတက်သူ
အနုပီယဘာဏီ - အနုပီယ - လျော်သော၊ ချစ်ဖွယ်စကားကိုသာ + ဘာဏီ - ပြောလေ့ရှိသူ ။ အလိုလိုက်၍ အကြိုက်ကိုသာပြော လေ့ရှိသူလည်း လေးမျိုးရှိပြန်၏။
(က) သတ်မှု၊ ခိုးမှု၊ မိန်းမလိုက်စားမှု၊ သေရည်သောက်မှု စသောမကောင်းမှုတစ်ခုခုကို ပြုဖို့ရန်တိုင်ပင်လာသောအခါ “ကောင်းသားပဲ ပြုကြစို့” ဟု သဘောကြအောင် လိုက်၍ပြောတက်သူ။
(ခ) “ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို ပြုကြစို့” ဟုတိုင်ပင်လာသောအခါလည်း “ပြုကြစို့”ဟုပင် လိုက်လိုက်လျောလျော ပြောတက်သူ၊ ဤသို့ပြောဆိုခြင်းကား မိတ်ဆွေ၏အကျိူးကို လိုက်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ရှိ၍ အယုံအကြည်ရှိအောင် လိုက်လျောခြင်းသာဖြစ်၏။
(ဂ) မိမိရှေ့မှာသာလျှင် ချီးမွမ်းစကားကိုပြောဆို၍ မိမိကွယ်ရာတွင် များစွာ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချတတ်သူ။
(ဃ) ကွယ်ရာ၌ကား အပြစ်ကိုပြောတက်၊ အကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တက်သူ၊ (ဤသူမျိုးကို ဟိတောပဒေသ ၀ယ် “အိုးနှုတ်ခမ်း၌ နို့ရည်တော်ကို ပြ၍ အတွင်းကအဆိပ်ပြည့်နေသော အဆိပ်ရည်အိုးနှင့်တူသူ” ဟုဆို၏။)
ဤလူလေးမျိုးသည်လည်း မိမိအလိုလိုက်၍ အကြိုက်ကိုပြောနေစေကာမူစင်စစ်အားဖြင့် အကျိုးပျက်အောင်ပြုနေသောကြောင့် မိတ်ဆွေတုသာဖြစ်၏။
(၄) အပါယသဟာယ - ပျက်စီးကြောင်းအမှုတို့၌ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူ
အပါယသဟာယ - အပါယ - ပျက်စီးကြောင်းအမှုတို့၌ + သဟာယ - အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူ။
(က) သေရည်သေရက်သောက်ရာ၌ သောက်ဖော်သောက်ဖက်ဖြစ်သူ၊
(ခ) အချိန်မတော်လမ်းထွက်၍ လှည့်လည်ရာ၌ လည်ဖော်လည်ဖက်ဖြစ်သူ၊
(ဂ) ပွဲံသဘင်ကို ပျော်ရွှင်လှည့်လည်၍ အလုပ်ပျက်အောင်ကြည့်ရှုရာ၌ သွားဖော်သွားဘက်ဖြစ်သူ၊
(ဃ) အလောင်းအစား အကစားအလုပ်၌ ကစားဖော်ဖြစ်သူ၊
ဤလူလေးမျိုးသည်လည်း ဥစ္စာပျက်စီးကြောင်းကိစ္စ၌ အဖော်ဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ဆွေတုသာဖြစ်၏။
သန့်ရှင်းမှုသည် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာကိုယ် ဟူသော အဇ္ဈတ္တ အတွင်းဓာတ် သန့်ရှင်းမှု, အ၀တ်အစား အိပ်ရာ နေရာစသော ဗဟိဒ္ဓ သန့်ရှင်းမှု ဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။
Click here for “The Buddha (BC 623- BC 543)
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အပိုင်း (၉) Part 9.”
Myoma Myint Kywe, Myoma Myint Kywe articles 2014, Karate Myint, Buddhism, Buddha BC 623, Buddha articles 2014, Buddhism booksie, Booksie Myoma Myint Kywe,
Metta 2014, About Metta 2014, Metta articles 2014, Metta Is Essential (Metta ist wichtig), มิวม่า มิตร จอย เมตตา Burmese Buddhism 2014, Burmese Buddhism articles, Theravada Buddhism articles, Theravada Buddhism 2014, Theravada monks 2014, Metta in Theravada Buddhism, Buddha and Metta, Metta meditation 2014 article, What is metta in Buddhism, what is Buddhism 2014, Myint Kywe, Myint Buddhism, Myoma Myint Kywe 2014, Articles of Myoma Myint Kywe, Buddha was born in BC 623, Buddhist philosophy 2014, Buddhism logic,
Copyright © 2014 The Buddhawasborn623bc. All Rights Reserved. Picture Window theme. Theme images by mariusFM77. Powered by Blogger.